2 Samueri 19 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Samueri 19:1-43
19 Gare gare Joabhi akaudzwa kuti: “Tarira! Mambo ari kusvimha misodzi, ari kuchema Absaromu.”+ 2 Naizvozvo zuva iroro kuponeswa kwakava nguva yokuchema kuvanhu vose, nokuti zuva iroro vanhu vakanzwa zvichinzi: “Mambo arwadziwa pamusoro pomwanakomana wake.” 3 Vanhu vakatanga kuverevedza zuva iroro kuti vapinde muguta,+ sokuverevedza kwaiita vanhu pavainyadziswa nokuti vainge vatiza kurwa. 4 Mambo akafukidza chiso chake, mambo akaramba achichema nenzwi guru achiti: “Mwanakomana wangu Absaromu! Absaromu mwanakomana wangu, mwanakomana wangu kani!”+ 5 Joabhi akazopinda maiva namambo mumba akati: “Nhasi manyadzisa zviso zvevashandi venyu vose, vapukunyutsa mweya wenyu nhasi+ nemweya yevanakomana+ venyu nevanasikana+ venyu nemweya yemadzimai+ enyu nemweya yevarongo+ venyu, 6 nokuda vaya vanokuvengai nokuvenga vaya vanokudai; nokuti mataura nhasi kuti vakuru nevashandi havasi chinhu kwamuri, nokuti ini ndinonyatsoziva nhasi kuti kudai Absaromu chete anga ari mupenyu uye isu tose tafa nhasi, chokwadi zvaizova zvakanaka kwamuri. 7 Zvino simukai, budai mutaure zvinosvika pamwoyo+ yevashandi venyu, nokuti, ndinopika naJehovha kuti, kana mukasabuda, hapana kana munhu acharara pamwe chete nemi usiku huno;+ uye izvi zvichava zvakaipa kwazvo kwamuri kupfuura zvinokuvadza zvose zvakauya pamuri kubvira muchiri muduku kusvikira iye zvino.” 8 Naizvozvo mambo akasimuka, akagara pagedhi,+ uye vakaudza vanhu vose kuti: “Tarirai mambo agara pagedhi.” Vanhu vose vakatanga kuuya pamberi pamambo. Asi vaIsraeri, mumwe nomumwe akanga atizira kumba kwake.+ 9 Mumadzinza ose aIsraeri, vanhu vose vakanga vachiitisana nharo vachiti: “Mambo ndiye akatinunura muchanza chevavengi vedu,+ uye ndiye akatipukunyutsa muchanza chevaFiristiya; asi zvino iye atiza Absaromu munyika.+ 10 Asi Absaromu, watakazodza,+ afira muhondo.+ Saka nei pasina chamuri kuita kuti mudzose mambo?”+ 11 Zvino Mambo Dhavhidhi akatumira shoko kuvapristi, Zadhoki+ naAbhiyatari,+ achiti: “Taurai nevarume vakuru vaJudha,+ muti, ‘Nei muchifanira kuva vokupedzisira kudzosa mambo kumba kwake, nepo shoko raIsraeri wose rasvika kuna mambo kumba kwake? 12 Muri hama dzangu; muri pfupa rangu nenyama yangu.+ Saka nei muchifanira kuva vokupedzisira kudzosa mambo?’ 13 Muti kuna Amasa,+ ‘Hausi pfupa rangu nenyama yangu here? Mwari ngaandiitire saizvozvo uye ngaawedzere pazviri+ kana usingazovi mukuru weuto pamberi pangu nguva dzose panzvimbo paJoabhi.’”+ 14 Iye akataura zvakabaya mwoyo yevarume vose vaJudha somunhu mumwe chete,+ zvokuti vakatumira shoko kuna mambo vachiti: “Dzokai, imi nevashandi venyu vose.” 15 Zvino mambo akadzokera, akasvika pedyo naJodhani. Asi vaJudha vakaenda kuGirigari+ kunochingura mambo, kuti vayambutse mambo mhiri kwaJodhani. 16 Shimei+ mwanakomana waGera+ muBhenjamini, aibva kuBhahurimu,+ akakurumidza kuenda pamwe chete nevarume vaJudha kunochingura Mambo Dhavhidhi. 17 Aiva nevarume chiuru vaibva kwaBhenjamini. (Aivawo naZibha+ mushandi weimba yaSauro aiva nevanakomana vake gumi nevashanu+ nevashandi vake makumi maviri, uye vakasvika zvakanaka kuJodhani pamberi pamambo. 18 Iye akayambuka zambuko+ kuti ayambutse imba yamambo uye kuti aite zvakanga zvakanaka kwaari.) Asi Shimei mwanakomana waGera, akawira pasi pamberi pamambo paakanga ava kuda kuyambuka Jodhani.+ 19 Akabva ati kuna mambo: “Ishe wangu ngaarege kundipa mhosva, musayeuka zvakaipa zvakaitwa nomushandi wenyu+ zuva iro ishe wangu mambo akabuda muJerusarema, kuti mambo azviise mumwoyo make.+ 20 Nokuti mushandi wenyu anonyatsoziva kuti ndini ndakatadza; naizvozvo nhasi ndava wokutanga kuuya paimba yose yaJosefa+ kuti ndiuye kuzochingura ishe wangu mambo.” 21 Abhishai+ mwanakomana waZeruya+ akabva apindura, akati: “Shimei haafaniri kuurayiwa nokuda kweizvi here, pakuti akatuka muzodziwa waJehovha?”+ 22 Asi Dhavhidhi akati: “Ndinei nemi,+ imi vanakomana vaZeruya, zvamunoda kuva mudzivisi+ wangu nhasi? Nhasi kungaurayiwa munhu pakati paIsraeri here?+ Handizivi here kuti nhasi ndiri mambo waIsraeri?” 23 Mambo akabva ati kuna Shimei: “Hausi kuzofa.” Uye mambo akamupikira.+ 24 Zvino Mefibhosheti+ muzukuru waSauro, akauya kuzochingura mambo; asi akanga asina kugeza tsoka+ dzake kana kugera usopo+ hwake uyewo akanga asina kugeza nguo dzake kubvira pazuva rakaenda mambo kusvikira adzoka norugare. 25 Zvino paakasvika kuJerusarema kuzochingura mambo, mambo akabva ati kwaari: “Mefibhosheti, wakaregererei kuenda neni?” 26 Iye akati: “Ishe wangu mambo, mushandi+ wangu ndiye akandinyengedza. Nokuti mushandi wenyu akanga ati, ‘Rega ndisungirire chigaro pambongoro hadzi kuti ndiitasve, ndiende namambo,’ nokuti mushandi wenyu akaremara.+ 27 Naizvozvo iye akachera+ mushandi wenyu kunashe wangu mambo. Asi ishe wangu mambo akaita sengirozi+ yaMwari wechokwadi, naizvozvo itai zvakakunakirai. 28 Nokuti imba yose yababa vangu ingadai isiri chinhu, yakatongerwa kufa nashe wangu mambo, asi makaisa mushandi wenyu pane vaya vanodya patafura yenyu.+ Naizvozvo ndichineizve chandingakumbira chakarurama kunyange chandingachemerazve+ kuna mambo?” 29 Zvisinei, mambo akati kwaari: “Nei uchiri kungotaura mashoko ako? Ndati, Iwe naZibha govanai munda wacho.”+ 30 Mefibhosheti akati kuna mambo: “Ngaatore hake wose,+ ishe wangu mambo zvaadzoka kumba kwake norugare.” 31 Zvino Bhazirai+ muGiriyedhi akauya achibva kuRogerimu kuti aende kuJodhani namambo kuitira kuti amuperekedze kuJodhani. 32 Bhazirai akanga akwegura kwazvo, ava nemakore makumi masere;+ uye iye akapa mambo zvokudya paaigara muMahanaimu,+ nokuti akanga ari munhu akapfuma kwazvo.+ 33 Naizvozvo mambo akati kuna Bhazirai: “Yambuka neni, ndichakupa zvokudya zvandiinazvo muJerusarema.”+ 34 Asi Bhazirai akati kuna mambo: “Mazuva emakore oupenyu hwangu mangani, kuti ndiende namambo kuJerusarema? 35 Nhasi ndava nemakore makumi masere.+ Ndichagona kutsauranisa zvakanaka nezvakaipa here, kana kuti mushandi wenyu achagona kuravidza zvaanodya nezvaanonwa here,+ kana kuti ndichagona kuteerera+ inzwi revaimbi vechirume nevechikadzi here?+ Naizvozvo nei mushandi wenyu achifanira kuvazve mutoro+ kuna ishe wangu mambo? 36 Nokuti mushandi wenyu agona kuperekedza mambo kuJodhani kwechinhambwe chipfupi chete, saka nei mambo achifanira kundiripa nomubayiro uyu?+ 37 Ndapota, regai mushandi wenyu adzokere, regai ndifire+ muguta rangu pedyo nenzvimbo yemakuva yababa vangu naamai vangu.+ Asi hoyu mushandi wenyu Kimhamu.+ Ngaayambuke naishe wangu mambo; mumuitire zvakakunakirai.” 38 Naizvozvo mambo akati: “Ndichayambuka naKimhamu, ini ndichamuitira zvakanaka kwauri; uye ndichakuitira zvose zvaungasarudza kureva kwandiri.” 39 Zvino vanhu vose vakatanga kuyambuka Jodhani, mambo akayambuka; asi mambo akatsvoda+ Bhazirai, akamukomborera,+ achibva adzokera kunzvimbo yake. 40 Mambo paakayambukira kuGirigari,+ Kimhamu akayambuka naye, nevanhu vose vaJudha, uyewo nehafu yevanhu vaIsraeri, kuti vayambutse mambo. 41 Zvino tarira! varume vose vaIsraeri vakanga vachiuya kuna mambo, vakati kuna mambo: “Nei+ hama dzedu varume vaJudha vakubai kuti vayambutse mambo neimba yake yose nevarume vose vaDhavhidhi vaainavo paJodhani?”+ 42 Varume vose vaJudha vakapindura varume vaIsraeri, vakati: “Nokuti tiri hama dzepedyo dzamambo;+ saka nei matsamwira chinhu ichi? Takambodya zvinhu zvamambo here, kana kuti takapiwa chipo here?” 43 Zvisinei, varume vaIsraeri vakapindura varume vaJudha vakati: “Tine zvikamu gumi kuna mambo,+ zvokuti kunyange kuna Dhavhidhi tine zvakawanda kukupfuurai. Saka, nei matizvidza, uye nei isu tisina kuva vokutanga+ kuti tidzose mambo?” Asi shoko revarume vaJudha rairwadza kupfuura shoko revarume vaIsraeri.
2 Samueri 19